स्लिप्स ह्यान्डलिंग - 802०२ क्विट
किन यो तंबाकू छोड्न गाह्रो छ
छोड्नको लागि तयार हुनुहोस्
म छोड्न चाहन्छु
तपाईंको छोड्ने योजना बनाउनुहोस्
Quitting मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्
नि: शुल्क प्याचहरू, गम र Lozenges
रमाईलो छोड्ने उपकरणहरू
Cravings कसरी प्रबन्ध गर्ने
स्लिप्स ह्याण्डल गर्दै
प्रोभिडर्स को लागी>
घर » Vermonters » क्विट जारी » स्लिप्स ह्याण्डल गर्दै
धूम्रपान, भाप वा अन्य सुर्तिजन्य छोड्नु भनेको नयाँ सीप सिक्नु जस्तै हो - बास्केटबल खेल्नु वा कार चलाउनु जस्तै। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु भनेको अभ्यास हो — किनकि जब तपाईले छोड्ने कोसिस गर्नुहुन्छ हरेक नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ। त्यसकारण हरेक प्रयास गणना गरिन्छ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले छोड्नु भएको सबै कामका लागि क्रेडिट दिनुहोस्। नबिर्सनुहोस्, यदि तपाईंलाई छोड्नको लागि केहि थप मद्दत चाहिन्छ भने, 802०२ क्विट प्रस्ताव अनुकूलित गरियो फोन (1-800-QUIT-NOW), व्यक्तिगत र अनलाइन द्वारा मद्दत गर्नुहोस्.
कहिलेकाँही, लक्ष्य पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न को लागी, तपाईं चिप्लन सक्छ। सबै स्लिपको अर्थ यो हो कि तपाईंलाई केहि विशेष अवस्थालाई ह्यान्डल गर्न अझ थोरै अभ्यास आवश्यक पर्दछ। कुञ्जी हो पछाडि ट्र्याकमा फर्कनुहोस् र पर्चीलाई तपाईंको मार्गमा जान नदिनुहोस्। यो महसुस गर्न स्वाभाविक हो वा सिगरेटको लालसा वा पर्चीको बारेमा केहि नकारात्मक विचारहरू छन्। यसका लागि तयार रहनुहोस्, र नकारात्मक भावनाहरूले तपाईंलाई धूम्रपान, भ्यापिंग वा अन्य सुर्तीजन्यमा फर्किन नदिनुहोस्।
सम्झनु: एक पर्ची मात्र एक पर्ची हो। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं धुम्रपान गर्ने, भापेर वा सुर्तीजन्य प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। सुर्तीजन्य रहन अक्सर गाह्रो हुन सक्छ। तपाईंलाई छोड्ने मद्दतको लागि यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग पुन: संयोग छ भने, याद गर्नुहोस्, धेरै व्यक्ति चिप्लन्छन्! एक सुर्तीजन्य मुक्त जीवन को लागी तपाईं कती टाढा यात्रा गर्नुभयो सोच्नुहोस् कि तपाईं अरू चीजहरूको आनन्द लिन बढी स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। भर्खर "ट्र्याकमा फर्कनुहोस्"।
छोड्नुको कारण कहिल्यै नबिर्सनुहोस्।
अर्को सिगरेटको "केवल १ पुफ" वा "च्युइ tobacco तम्बाइको केवल १ च्यू" वा "केवल १ भ्याप-हिट" पनि नराख्नुहोस्।
तर्कसंगत नगर्नुहोस् र सोच्नुहोस् कि तपाईंसँग एउटा मात्र छ।
जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरूको लागि योजना बनाउनुहोस् (बोरडम, रक्सी, मदिरापान, तनाव) र सुर्तीजन्यको सट्टा तपाई के गर्नुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस्।
सुर्तीजन्य प्रयोग नगरेकोमा आफैलाई इनाम दिनुहोस्। तपाइँलाई अर्थपूर्ण केहि मा सिगरेट वा अन्य उत्पादनहरु को खरीद छैन बाट बचत पैसा प्रयोग गर्नुहोस्। यो एक प्रयोग गरिएको कार जत्तिकै ठूलो हुन सक्छ, किनकि एक दिनको १ प्यारा चुरोट प्रति वर्ष $ ,1००० भन्दा बढी लाग्न सक्छ।
सुर्तीजन्य को उपयोग गर्न रोक्न को लागी गर्व गर्नुहोला र अरु संग आफ्नो कहानी साझा।
आफूलाई धूम्रपान नगर्ने, सुर्तीजन्य रहितको रूपमा सोच्न थाल्नुहोस्।
कुनै व्याकुलता चाहिन्छ?
दुई नि: शुल्क छोड्ने उपकरणहरू छनौट गर्नुहोस् र हामी ती तपाईंलाई मेल पठाउने छौं!
नि: शुल्क छोड्ने उपकरणहरू>
जब 802०२ क्वाइट्सले यस वेबसाइटमा सुर्तिजन्यलाई सन्दर्भ गर्दछ, हामी व्यापारिक, नाफामुखी तम्बाकूलाई स .्केत गर्दछौं जुन मनोरन्जन र बानीका लागि प्रयोग हुन्छन् र पवित्र र परम्परागत सुर्तीजन्य केही अमेरिकी भारतीय समुदायहरू द्वारा औपचारिक वा औषधीय उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ईनरोल गर्न कल गर्नुहोस्
अनलाइन भर्ना गर्नुहोस्
2020 २०२० स्वास्थ्यको VERMONT विभाग।